Jijiga: Ha ka Qadin Qaan-baxa Atoobiya, Bax oo Qaado Axankaaga .. – Rasaasa News
Jijiga: Ha ka Qadin Qaan-baxa Atoobiya, Bax oo Qaado Axankaaga ..
Jijiga, Apr 12, 2014 – Waxaa shalay lagu soo dhaweeyey garoonka degmada Jijiga ee Garaad Wiil Waal Qurbo joog u dhalatay gabalada Qoraxeey iyo Shabeele, kuwaas oo ka jawaabay hal ku dhaga maamulka “kaalay dhul qaado.”
Qurbo joogta gaadhay magaalada Jijiga ayaa si gaar ah waxay uga soo jeedaan degmooyinka Dhooba-wayn, Shilaabo iyo Qalaafe, kuwaas oo ka kala tirsan gabalada Qoraxeey iyo Shabeele, laakiin Qurbo joogta ayaa ah hal beel sida aan ka soo xiganay Xafiiska Qurbo Joogta ee Jijiga.
Qurbo Joogtan, waxaa garoonka Garaad Wiil Waal si diiran ugu soo dhaweeyey madax xafiisyeedyo, masuuliyiin maamulka ka tirsan, kooxaha dhaantada ee Jijiga iyo wakiilada Qurbo joogta ee Madaxwayne Cabdi Iley.
Madax Xafiiseeyda soo dhaweeyey Qurbo joogta, waxaa ka mid ah; madaxa xafiiska Qurbo-joogta Cabdi Bari Macalin Maxamed, madaxa xafiiska maalgalinta Cabdi Naasir, madaxa xafiiska maalilyada Maxamed Ibraahin, madaxa xafiiska masiibooyinka Maxamed Faatax Maxamed, madax xafiiska HIV Hure Cabdi Adar, ku xigeenka xafiiska caafimaadka Cabdifataax Siciid iyo wakiilka Cabdi Iley ee Xafiiska Qorbo jooga Xuseen Sheekh Ibraahin [Xuseen il-giir] iyo masuuliyiin badan.
Soo dhawaynta xad dhaafka ah ee uu u sameeyo maamulku qorbo joogta u socota qaraabo salaanka ayaa muujinayasa heerka uu maamulku ka taagan yahay dharbaaxooyinka uu ku hayo ururuka ONLF. Waxaa kale oo ay muujinaysaa in masuuliyiinta maamulku ayna haynin wax qabad shacab, laakiin ay caajis la dhex fadhiyaan xafiisyada maamulka.
Qurbo joogta, ayaa markii ay magaalada soo galeen waxaa la geeyey taalada loo dhisay Sayyid Maxamed Cabdille Xasan, waxaa la sheegay in qaar ka mid ah ay ooyeen iyaga oo aan sheegin sababta ay la ilmeeyeen.
Dadka u dhashay degaanka Somalida ayaa had iyo goorba u taga degaanka si yaabo kala duwan, laakiin qaarka la soo dhaweeyo ayaa u socda arimo la xidhiidha dhul qaado, iyaga oo u diyaar garooba in ay ESTV ka caytamaan si ay u xoojiyaan dhul siinta.
Maamulka degaanka ayaa isaga laftigiisu u isticmaala dacaayad ay kula dagaalamo Jabhada ONLF, isaga oo tusa in quro joogtu taageersan tahay maamulka degaanka. Maamulka ayaa qurbo joogta waxaa uu tusaa kala mudnaansho ay ku kala mutaystaan cayda ay caayaan ururka ONLF, iyo in ay maamulka amaanaan. Waxaana loo sameeyey Xafiis la sheegay in ay ka qaataan warqado muujinaya Atoobiyaanimadooda iyo Qabiilka ay yihiin.
Dadka Qurbaha ka taga oo u badan duqay, haween iyo caruur ayaa u taga fasaxa, si ay soo arkaan ehelkooda. Imaanshahaas ayuu maamulku ugu mana sheegtaa in uu ogolaaday, isga oo u sameeya xaflado sawirana ka qaada si ay kalsoonidu uga tagto isuguna arkaan in ay Xabashi raac noqdeen.
Dadka kale ee taga degaanka ayaa ah dad nolosha ka dhacay oo la qabsan waayey horumarka ka jira dalalka galbeedka, kuwaas oo ay aragtidoodu ku kooban tahay mijin jaad ah.
Waxaa kale oo jira dad qurbaha ka tagay iyo kuwa degaanka jooga oo magaalada Jijiga ka dhisanaya guryo iyo goobo ganacsi, Kuwaas oo aan ka magansanayn maamulka iyo Atoobiya midna in ay dhistaan dhulkooda.
Qurba joogtu waa ajaanib, waxayna Atobiya ku tagaan Vissa, ayna la,aanteed joogeen Atobiya. Taas oo ay xaq u leeyihiin una diidi karin Atoobiya, waayo lacag bay ku gataan vissa-da. Waxaa muhiim ah in dadka Qurba joogta ah kolka ay tagaan Atobiya in ay la xidhiidhaan safaaradaha ay wataan dhalashadooda kuwaas oo wax ka qaban kara wixii ku dhaca.
ESTV Maxaa U Diiday Muxaadarooyinka Diinta Islaamka?